Warkani Waxaa Kaa Qariyey Warbahintooda…..Xaaladda Iyo Naceybka Dumarka Oo.. | Xaqiiqonews
Warkani Waxaa Kaa Qariyey Warbahintooda…..Xaaladda Iyo Naceybka Dumarka Oo..
“12 sano oo aan ku dhax noolaa Jaxiima” sidaadi ayey ku tilmaatay dagaalyahanad “Barbie” maalmaheedii noolasha ee ay ku soo qaadatay Ciidanka Ingiriiska ka hor inta aysan go,aansan in ay ka tagto.
Xaqiiqonews ayaa ka soo tarjuntay ‘The Daily Mirror” in boqoradii hore ee xagga quraxda ingiriiska , ay ka tagtay Ciidanka, ka dib “Olale habeysan” oo ah xadgudubyo xagga jinsiga ah.
Waxaa intaasi u sii dheereyd in ay ku ay ku tilmaameen “xumaan oo dhan” waxaa ay u soo direen “FariimoNaceyb” mid ka mid ah ayaa si toos ah u weeraray iyada oo ku sugan mid ka mid ah teedhooyinka Ciidanka, hase yeeshee ma jirin wax dabagal oo arintaasi lagu sameeeyey.
Waxa ay sheegtay in xadgudubyadaasi foosha xun ay la nooleyd muddo 12 sano ah, iyada oo ku tilmaamtay “xodxodasho galmo oo iska cad”
“Tan iyo markii aan ka soo laabtay Basra iyo ammaantii balaarneyd ee ay ii soo jeediyeen hoggaamiyeyaasha ee geesinimadayda, waxaa bilaabmay olole nacayb ah, sababtoo ah waxay u maleynayaan in aan ammaanta ku helay dumarnimadeyda,” Katrina ayaa sidaas tiri.
Waxa ay intaasi ku dartay “”Arinku waxa uu ahaa mid aad u cabsi badan, waxay iigu yeeri jireen magacyo xunxun sida Tii Xumeyd,Eyda iyo Beenleyda, mar xitaa waxa ay ku dul tuureen madaxayga sanduuq dhuxul ah , waxaanan ka baqayay inaan ka baxo makhaayadda si aan ula kulmin weerar.”
Katrina Hodge ayaa ku biirtay Ciidanka ingiriiska iyada oo 17 sano jir ah, waxa ay qeyb ka aheyd Ciidankii Ingiriiska ee Ciraaq duulaanka ku qaaday, xilligaasi oo ay caan ku noqotay magaca ah “Dagaalyahanad Barbie”, hase ahaate Barbie ayaa isaga tagtay Ciidanka ka dib Maalmo Dhiig ka da,aya oo ay ku soo qaadatay teendhooyinka Ciidanka Ingiriiska.